बिदेश Archives | Page2of 23 |
एजेन्सी । आफ्नै आमाले छोरालाई बलात्कार गरेको कहिल्यै सुन्नुभएको छ ? अमेरिकाको ओहायोस्थित सिनसिनाटी शहरमा २० वर्षीया एक आमाले आफ्नै ४ वर्षीय छोराबच्चासँग रेप गरेको भिडियो बाहिरिएसँगै बलात्कारी आमाको अश्लिल हर्कत बाहिरिएको छ । ४ फेब्रुअरीमा ओहायोस्थित सिनसिनाटी शहरमा बस्दै…
४ वर्ष नियमित सम्भोग गर्दा पनि महिला भर्जिन, कारण जान्दा डाक्टरले हाँसो रोक्न सकेनन्
२०७५, ११ भाद्र सोमबार ००:०२ August 27, 2018 ताजा खबरबिदेश
एजेन्सी। चीनमा एक दम्पती बिहे गरेको ४ वर्षसम्म नियमित सम्भोग गर्दा पनि महिला गर्भवती नभएको भन्दै डाक्टरकहाँ गए । उनीहरुले डाक्टरलाई भने कि उनीहरुले नियमित रुपमा सम्भोग गरिरहेका छन् तर पनि गर्भ रहेन । डाक्टरले महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा उनीमा…
२०७५, ९ भाद्र शनिबार १३:१० August 25, 2018 ताजा खबरबिदेश
काठमाडौं : प्रहरी चौकीको छेउबाट रातीदेखि आवाज आइरहेको थियो । तर, त्यो आवाजलाई कसैले वास्तै गरेनन् । रातीमा त्यहाँ मानिसहरु पनि कम भएकोले पनि त्यतातिर कसैको ध्यान गएर । बिहीबार बिहान मानिसहरुको आवतजावत बढ्यो । बिहान पनि झाडीबाट आवाज आयो…
सावधान ! मुटु दरो हुनेले मात्र क्लिक गर्नुहोला, प्राचीन कालमा यसरी कठोर यातना दिइन्थ्यो
२०७५, ९ भाद्र शनिबार ११:०५ August 25, 2018 ताजा खबरबिदेश
एजेन्सी । अहिले त धेरै देशमा ऐन नियम बनेका छन् । युग बदलिएको छ । आजको युगमा अपराधीलाई सजाय दिनका लागि कारागारमा राखिन्छ । कुनै कुनै देशमा जघन्य अपराधका लागि मृत्युदण्डको विधान छ । तर परापूर्वक कालमा अपराधी तथा शत्रुदेशका…
पत्याउनुहुन्छ ? भेनेजुएलामा एक किलो टमाटरको मूल्य : ५० लाख !
२०७५, ७ भाद्र बिहीबार १७:४९ August 23, 2018 ताजा खबरबिदेश
एजेन्सी : भेनेजुएलामा महंगीले आकाश छोएको छ । भलै भेनेजुएलाको सरकारले महंगी नियन्त्रण गर्न नयाँ योजना अगाडि सारेको छ, तर पनि के ती योजनाले काम गर्लान् भन्ने प्रश्न भने उठिराखेको छ । निकोलस माडुराको सरकारले आफ्नो मुद्राको नाम बोलिवारबाट परिवर्तन…
‘ट्रम्पले आफ्ना यौन साथीहरुलाई रकम दिएर नियम उल्लघंन गरे’
२०७५, ७ भाद्र बिहीबार १४:५७ August 23, 2018 ताजा खबरबिदेश
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका पूर्व वकिल माइकल कोहेनले राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना यौन साथीहरुलाई रकम दिएर चुनावी वित्तीय नियमको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । करिब एक दशकसम्म ट्रम्पको वकिलको रुपमा काम गरेका कोहेनले अमेरिकी म्यानहटन अदालतमा राष्ट्रपति ट्रम्पले…
धेरै नर्स सँगै गर्भवती भएपछि…
२०७५, ७ भाद्र बिहीबार १४:४३ August 23, 2018 ताजा खबरबिदेश
बीबीसी : एरिजोनाको मेसा स्थित एक अस्पतालको अति सघन कक्ष (आइसीयू)मा कार्यरत नर्सहरुमध्ये १६ जना करिव एउटै समयमा गर्भवती भएका छन्। शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नर्सहरु स्वयंले ठट्टा गरे, ‘आगामी क्रिस्मसमा सँगै छुट्टि लिने भनेर सल्लाह गरेरै गर्भवती भएको।’ उनीहरुले…
यस्तो छ हजुरआमा–नातिनीको भाइरल तस्वीरको पूरा भित्री कहानी
२०७५, ७ भाद्र बिहीबार ११:११ August 23, 2018 ताजा खबरबिदेश
बीबीसी। भनिन्छ, एक तस्वीरले हजार भन्दा धेरै शब्दको वयान गर्छ। एक यस्तै तस्वीर यतिबेला सामाजिक संजलामा भाइरल भएको छ। यो तस्वीर शेयर गरेका मानिसले लेखेको कुरा पनि भाइरल भएको छ। पोस्ट गरिएको उक्त तस्वीरसँग लेखिएको छ, ‘एक स्कुलले आफ्नो स्कुलमा…
नातिनीले हजुरआमालाई वृद्धाश्रममा देखेपछि यसरी रुइन्, तस्बिर भयो भाइरल
२०७५, ६ भाद्र बुधबार २०:०४ August 22, 2018 ताजा खबरबिदेश
काठमाडौँ । मानव जीवन सम्बन्ध भन्दा बाहिर सम्भव छैन । सम्बन्धहरुले जीवन निरन्तर चलिरहन्छ । हजुर आमा र नातिनीको सम्बन्ध धेरै गाढा हुन्छ । यस्तै सम्बन्ध झल्काउने हजुर आमा र नातिनीको तस्विर यतिखेर सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ । ती…
२०७५, ५ भाद्र मंगलवार १०:१० August 21, 2018 ताजा खबरबिदेश
काठमाडौं । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले प्रधानमन्त्री निवास छाडेका छन् । खान सोमबारबाट तीन वटा बेडरुम भएको सामान्य घरमा बस्न थालेका हुन् । उनले आफूसँग सैन्य सुरक्षाका साथै दुई कामदार लगेका छन् । जबकी प्रधानमन्त्री निवासमा कर्मचारी मात्र ५२४ जना…